Imizuzu yestudio yegadi yanamhlanje ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya eSydney!!
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguYasmina
Esi sisitudiyo esitsha kraca sesitayela se-boutique. Ibucala, izolile kwaye ineembono ezigqwesileyo zegadi ukusuka ngaphakathi kunye nomgangatho wabucala. Ngebhedi enye yobukhulu bokumkanikazi ilungele umhambi omnye okanye isibini ( 3nights max ukuhlala kwizibini ezitshatileyo) ezikhetha isitudiyo sendalo esisezantsi kwigumbi lehotele. Indawo ye-Bbque ekhoyo kunye neendawo zokutyela ezine (kubandakanya ibhaso lokutya esitratweni samaGrike) kwindawo yokuhamba. Olona lwandle lukufutshane kukuhamba ngemizuzu emihlanu ukuya kwelishumi. Isikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe 7min drive.NBN
Iindwendwe zinokungena ngendlela yabucala kwaye zinofikelelo olukhethekileyo kwisitudiyo. Idekhi yabucala isetyenziselwa iindwendwe kuphela.
Ubumelwane bubekwe ngokugqibeleleyo kwimizuzu esixhenxe ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseSydney. Ngaphandle koku kufutshane okumangalisayo akukho ngxolo yenqwelomoya njengoko ndingekho kwindlela yokubhabha .
Kukho isimbo esikhulu saseYurophu elunxwemeni iBrighton Le Sands kufutshane neMizuzu elishumi kuphela yokuqhuba kwaye kukho indawo yokugcina indalo emangalisayo eBardwell Valley parklands apho iindwendwe zinokwenza ukubaleka kwazo kusasa. Yimizuzu elishumi ukuya kwelishumi elinesihlanu uqhuba ukuya eNewtown-isixeko saseSydney sezizwe ezininzi! Konke oku, kudityaniswa noyilo olutsha kunye noyilo lwangoku luya kwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kwaye kukhumbuleke.
Umbuki zindwendwe ngu- Yasmina
I am a 45 year old professional woman who lives and works in NSW. I enjoy hosting and take great pride in offering quality inclusions for my guests.Cleanliness and comfort is at the top of my list so guests can rest assured they will enjoy an immaculate home all to themselves.I have in the past, managed a restaurant with my partner, lived in Europe for eight years, and I have travelled extensively across Asia, Europe and Australia.I understand what is important for guests and promise to deliver and offer only the best.
I am a 45 year old professional woman who lives and works in NSW. I enjoy hosting and take great pride in offering quality inclusions for my guests.Cleanliness and comfort is at th…
Ndinokuba okanye ndingabikho kwizakhiwo ngexesha lokuhlala kwakho. Indawo yokungena ephambili esuka esitratweni isetyenziswa ngabaqeshi kunye nam. Oku akuzukuba nefuthe kuwe njengondwendwe njengoko benendlela yabo ecokisekileyo yokungena kwigumbi labo le-2.
Ndinokuba okanye ndingabikho kwizakhiwo ngexesha lokuhlala kwakho. Indawo yokungena ephambili esuka esitratweni isetyenziswa ngabaqeshi kunye nam. Oku akuzukuba nefuthe kuwe njengo…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-24820
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bexley